Iindaba -Coronavirus conundrum: Iziqulathi zisafumaneka ngokufutshane
"Ukusukela kwikota yesithathu, sibone ukonyuka okungenakuthelekiswa nanto kwimfuno yezothutho," utshilo uNils Haupt wenkampani yokuhambisa iikhonteyina uHapag Lloyd uxelele iDW. Kukukhula okungalindelekanga kodwa okwanelisayo kulandela iminyaka eli-12 yokudodobala kweshishini kunye nokuqala kwesifo.
U-Haupt uthe ukuhambisa ngenqanawa kwabethwa kakhulu ngoJanuwari nangoFebruwari 2020 njengoko imveliso yaseTshayina iye wema, kwaye ke nako nokuthumela kwelinye ilizwe ukuya eAsia. "Kodwa izinto zajika, kwaye ibango lathatha indawo eMelika, eYurophu nase Mzantsi Melika," ukhumbule. "Imveliso yaseTshayina yaqalwa kwakhona, kodwa kwakungekho mininzi imisebenzi yezothutho - icandelo lethu lalicinga ukuba liza kuhlala linje iiveki okanye iinyanga."
Ukutshixwa kwezizathu kubangela ukuqhuma
Izinto ziphinde zatshintsha ngo-Agasti xa iimfuno zothutho lweekhonteyina zithathe kakhulu, zodlula amandla okubonelela. Le boom ikwabangelwa kukutshixeka, ukubona abantu abaninzi besebenza ekhaya kwaye bachitha imali encinci kuhambo okanye kwiinkonzo. Ngenxa yoko, uninzi lutyalile imali kwifenitshala entsha, izixhobo zombane zabathengi, izixhobo zemidlalo kunye neebhayisikile endaweni yokugcina imali. Ukongeza, amashishini amakhulu kunye nabarhwebi baye bagcina oovimba babo kwakhona.
Iifleet azinakukhula ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuze zihambelane nemfuno eyandisiweyo yokuhambisa isikhongozeli. "Abanini beenqanawa abaninzi baye balahla iinqanawa ezindala kule minyaka imbalwa idlulileyo," uBurkhard Lemper ovela kwi-Institute for Shipping Economics and Logistics (ISL) uxelele iDW. Wongeze ngelithi abanini benqanawa nabo babemathidala uku-odola iinqanawa ezintsha, kwaye emva kokuqala kwengxaki ye-coronavirus ezinye ii-odolo zarhoxiswa.
“Eyona nto isixhalabisayo okwangoku kukuba asinazo iinqanawa zokuthengisa kwimarike,” utshilo uNils Haupt kaHapag Lloyd, esongeza ukuba akunakwenzeka ngoku ukuqesha iinqanawa. “Zonke iinqanawa ezikwaziyo ukuthwala izikhongozeli kwaye ezingekhoyo kwiiyadi zomsebenzi wokulungisa ziyasetyenziswa, kwaye akukho zixhobo zokugcina izinto,” utshilo uRalf Nagel ovela kuMbutho wabanini beenqanawa baseJamani (VDR) e-vis-a-vis DW.
Ulibaziseko lwezothutho longeza kunqongophala
Ukungabikho kweenqanawa ayisiyiyo kuphela imbambano. Imfuno enkulu kunye nobhubhane zibangele ukuphazamiseka okukhulu kumazibuko kwaye ngexesha lothutho olungena ngaphakathi. ELos Angeles umzekelo, iinqanawa kufuneka zilinde malunga neentsuku ezili-10 ngaphambi kokuba zivunyelwe ukungena kwizibuko. Ukunqongophala kwabasebenzi ngenxa yamanyathelo okutshixa kunye namagqabi agulayo ayenza mandundu imeko, kwaye ngamanye amaxesha ubhubhane ubabeka bodwa abasebenzi.
"Kusekho malunga nama-400,000 oomatiloshe phaya abangafumaneki endaweni yawo," utshilo uMongameli we-VDR u-Alfred Hartmann.
Izikhongozeli ezingenanto ziyibhotile yokwenyani njengoko zihlala zihlala elwandle ixesha elide kunesiqhelo ngenxa yokulibaziseka kumazibuko, kwimijelo nangaphakathi kwezothutho lwangaphakathi. NgoJanuwari kuphela, iinqanawa zeHapag Lloyd zazithatyathwe emva kweeyure ezili-170 ngokomndilili kwiindlela zeFar East ezihamba rhoqo. Kwiindlela ezidlula kwiPasifiki, ulibaziseko longezwe ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-250 ngokomndilili.
Ngapha koko, izikhongozeli zihlala zihlala kubathengi ixesha elide de zibe nokuphathwa. “Kunyaka ophelileyo nasekuqaleni kwalo nyaka, sathenga iikhonteyina ezintsha ezingama-300 000, kodwa nezo bezingonelanga, utshilo uHaupt. Ukuthenga nangaphezulu kwakungekho enye indlela, wongeze, kuba abavelisi babesele besebenza ngokuzeleyo kwaye amaxabiso sele enyukile.
Imithwalo ephezulu yemithwalo, inzuzo ephezulu
Imfuno ephezulu ikhokelele ekunyukeni kwemithwalo yemithwalo, ibeka abo baneekhontrakthi zexesha elide kuncedo - izivumelwano ezibethwe phambi kokuba kuqalise. Kodwa nabani na ofuna amandla angaphezulu othutho ngesaziso esifutshane kunyanzelekile ukuba aqokelele imali eninzi kwaye angazijonga nethamsanqa ukuba iimpahla zabo zithunyelwa kwaphela. "Okwangoku, yinto engenakwenzeka ukubhukisha umthamo wokuthumela ngesaziso esifutshane," uqinisekisile uHaupt.
Ngokuka-Haupt, amaxabiso emithwalo ngoku aphindwe kane ukuphakama njengokuba ayenjalo kunyaka ophelileyo, ngakumbi malunga nokuhanjiswa okusuka e-China. Umyinge wexabiso lempahla eHapag Lloyd inyuke nge-4% kwi-2019, utshilo uHaupt.
Njengenkampani enkulu yokuhambisa izikhongozeli eJamani, uHapag Lloyd ube nonyaka olungileyo ngowama-2020. Kulo nyaka, inkampani ilindele enye ukutsiba kwinzuzo. Inokugqibezela ikota yokuqala ngengeniso ngaphambi kwenzala kunye nerhafu (i-Ebit) ye- € 1.25 yezigidigidi (i-1,25 yezigidigidi zeedola), xa kuthelekiswa nee-160 zezigidi zeerandi kwangelo xesha linye kunyaka ongaphambili.
Eyona nkampani inkulu yokuthumela izikhongozeli, iMaersk, ingenise ingeniso yokusebenza ehlengahlengisiweyo ye- $ 2.71 yezigidigidi kwikota yesine yonyaka ophelileyo. Ifemu yaseDenmark ikwalindele ukuba umvuzo unyuke ngakumbi kwi-2021.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Zonke iiMveliso